Ofemeswa neroja | Kwayedza
13 Sep, 2019 - 00:09	 2019-09-12T12:48:25+00:00 2019-09-13T00:13:49+00:00 0 Views
ROJA remuHarare rakazvuzvurudzirwa kudare redzimhosva nemuridzi wepamba paraimbogara richinzi riri kumushungurudza nekudzoka kumba kwake richimutuka zvinyadzi.
Clemence Chibusha akamhan’arira Casper Mukotekwa kuHarare Civil Court.
“Mukomana uyu aimbova muroja wangu, zvino ndinokumbira asauye pamba pangu kana kundifonera. Anondifonera achindituka zvinyadzi nekundityisidzira. Handizive kuti sei achindidaro zvinotondishungurudza,” anodaro.
Chibusha anoti Mukotekwa akamboenda kumba kwake akanopwanya-pwanya zvinhu zvake.
“Akabva pamba pangu munaKukadzi saka handione chinangwa chekuti adzokere sezvo tisisina hukama hunotibatanidza. Akambopwanya zvinhu zvemumba mangu ndikamumhan’arira kumapurisa akasungwa,” anodaro.
Mukotekwa anotiwo, “VaChibusha vari kuda kutora gwaro iri nekuti vanoda kuzondishungurudza. Handina kumbobvira ndatsika kumba kwavo kubva ndatama musi wa12 Chikumi gore rino. Ndinotya kuti ndakabvumirana negwaro iri vanogona kungondisungisa vandiona ndichingozvifambirawo hangu.”
Anoti Chibusha ari kurambira nezvinhu zvake zvinosanganisira iPad izvo zvaakamutorera paakange achiri kugara pamba pake.
“Anoda kunditadzisa kutora zvinhu zvangu. Chandinongoda kuwana zvinhu zvangu ivo votora havo gwaro rerunyararo,” anodaro.
Mutongi Noah Gwatidzo anoti nyaya ichazoenderera mberi nekutongwa kana Mukotekwa apihwa zvinhu zvake zvinonzi zvakatorwa naChibusha.